Torolàlana feno amin'ny fampitomboana ny famokarana fitarihana sy ny tahan'ny fiovam-po - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Analytics
Tena zava-dehibe amin'ny fahombiazanao ny famoronana mpitarika raharaham-barotra ary ny fanitarana azy. Raha ny momba ny Hafanàm-po an-barotra manokana, misy fomba maro ahafahanao mahazo fitarihana bebe kokoa. Noho izany, ity misy torolàlana feno amin'ny fampitomboana ny famokarana fitarihana sy ny tahan'ny fiovam-po.
1. Mitadiava fitaovana mety amin'ny tanjonao
Voalohany indrindra, mila mitady fitaovana mety amin'ny tanjonao ianao. Raha tsy afaka manara-maso ny fitarihanao ianao ary manara-maso ny tahan'ny fiovam-po, dia tsy ho fantatrao fotsiny izay tokony hohatsaraina. Toy izany koa, mila mampiasa fitaovana manan-danja ianao hanampy anao hahazo ireo fitarihana voalaza ireo.
Ny fitaovana ampiasainao dia hiova arakaraka ny sehatra, fa ny sasany amin'ireo be mpampiasa indrindra dia mbola Google Analytics ary ny Google Ads ary koa ny fahitana raharaham-barotra haino aman-jery sosialy kaonty manome.
2. Diniho ny tsena sy ny mpifaninana aminao
Ny dingana lehibe iray hafa dia ny famakafakana ny varotra sy ny mpifaninana aminao alohan'ny hanombohanao manomana hetsika ho anao manokana. Ny fahafantaranao izay ataon'ireo mpifaninana aminao dia hanampy anao hanapa-kevitra hoe inona ny teknika tokony hampiasainao amin'ny fampielezan-kevitrao manokana.
Toy izany koa, ny fahatakarana ny tsena (ohatra ny fahitana ny fironana toy ny video marketing) dia hanampy anao hampiasa ny fironana amin'ny fomba mahomby kokoa. Tsara ihany koa ny manaraka ny vaovao farany momba ny indostria.
3. A/B Test izay tianao hampiasaina
Ny fitiliana A/B dia iray amin'ireo fanao be indrindra ilainao hanombohana mampiasa haingana araka izay azo atao raha mbola tsy mampiasa azy ianao. Na lohatenin'ny lahatsoratra izany, na andalana lohahevitra mailaka, na bokotra hetsika vaovao ho an'ny pejy fipetrahanao dia mila manandrana azy mialoha ianao.
Mandritra izany fotoana izany, ataovy fahazarana ny fanaovana fitiliana A/B tsy tapaka. Amin'izany fomba izany, azonao atao ny mampitombo ny vokatry ny ezaka rehetra ataonao ary mahita ny toerana malemy indrindra amin'ny paikadinao alohan'ny hahatongavany ho olana lehibe.
4. Ataovy lohalaharana ny kalitao mihoatra ny habetsany
Na dia azo antoka aza fa misy teknika maro samihafa azonao ampiasaina hampitomboana ny taham-pamokarana fitarihana sy ny tahan'ny fiovam-po, tsy misy amin'izy ireo no hanome vokatra tsara ho anao raha tsy tanterahanao tsara. Izany indrindra no antony ilazanao laharam-pahamehana ny kalitao fa tsy ny habe.
Ohatra, mety hanoratra lahatsoratra bilaogy ho anao ianao fampianarana-tranonkala mifandraika amin'ny famoronana fifamoivoizana bebe kokoa sy hisarihana mpanjifa mety ho betsaka kokoa. Raha tokony hampiasa teny fototra tokana toy ny “ataovy ho ahy ny entimodiko” ary fenoy ny lahatsoratra miaraka aminy, mitadiava teny fanalahidy mifandraika kokoa ary ampiasao mandritra ny lahatsoratra.
5. Manatsotra sy manala ny fanelingelenana
Marina fa ny kely dia be kokoa, indrindra raha ny momba izany UX sy UI. Izany indrindra no antony ilanao hanatsorana ny tranokalanao sy hanaisotra ny fanelingelenana fa tsy manandrana manampy singa sy antsipiriany betsaka araka izay azo atao.
Tsy mila lahatsoratra betsaka araka izay tianao ampiana ny pejinao. Safidio ny sary ho solon'izay ary mety hieritreritra ny hampiasa vidéo mihitsy aza. Toy izany koa, ny tranokalanao dia ho tsara kokoa raha esorinao ireo singa izay tsy ilaina amin'ny fanatrarana ny tanjonao.
6. Ampiasao ny FOMO (Fear of Missing Out)
FOMO na ny Fear of Missing Out dia zavatra efa nampiasaina tamin'ny varotra nandritra ny am-polony taona maro na tsy taonjato maro. Azonao atao ny mampiasa azy io amin'ny fomba maro amin'ny famoronana tsy fahampiana sy maika, fananana tolotra indray mandeha, sy ny sisa.
Marcus Armstrong, mpivarotra sady mpanoratra, dia nilaza hoe: “Raha tiako mandoa olona hanoratra ny taratasiko fikarohana, mety haniry manam-pahaizana aho hanao izany. Na izany aza, raha mahita mpanoratra tsara aho manolotra fihenam-bidy indray mandeha, dia mety hifidy an'io mpanoratra io aho fa tsy ilay lafo kokoa izay mety ho tsara kokoa ny asany. "
7. Ampiasao ny porofo ara-tsosialy mba handresena lahatra
Porofo ara-tsosialy fantatra fa tena ilaina amin'ny fandresen-dahatra ny mpanjifa mba hividianana marina tokoa noho ny toetrany miavaka. Tsy orinasa manazava ny antony maha-be ny vokatra fa ny mpanjifa mihitsy no manao izany.
Noho izany, hevitra tsara ny mampiasa porofo ara-tsosialy mba handresena lahatra ny mpihaino anao. Manampia pejy iray ho azy ao amin'ny tranokalanao izay ahitanao fijoroana vavolombelona sy hevitra. Azonao atao koa ny manampy azy ireo amin'ny mailaka ary koa manara-maso ny votoaty vokarin'ny mpampiasa haino aman-jery sosialy.
8. Hatsarao ny CTA (Antso ho amin'ny hetsika)
Ny CTA na Calls to Action no mahatonga ny mpanjifa mety hanao ny hetsika tianao hataony. Izany no antony maha-zava-dehibe ny maka fotoana hiasa amin'ny CTA-nao sy hanatsara azy ireo araka izay tratra.
Ohatra, ny anao raharaham-barotra mety manolotra tolotra fanoratana. Na dia misy olona mitsidika ny tranokalanao aza mieritreritra hoe: “Mitady aho olona hanoratra ny disertation-ko, fa amin'ny ho avy ihany," mety hampiasa ny serivisinao izy ireo satria niasa tsara tamin'izy ireo ny CTA-nao.
9. Hafohy ny endrika tranokalanao
Araka ny voalaza teo aloha, ny fanatsorana ny tranokalanao sy ny fanesorana ireo fanelingelenana dia mety hahasoa indrindra. Toy izany koa, mila manafohy ny endrika tranokalanao ianao mba hahatonga azy ireo tsy hampatahotra sy ho mora kokoa ho an'ny mpitsidika ny tranokalanao. Raha mora ny manafatra zavatra na misoratra anarana fotsiny amin'ny gazetinao, dia ho maro kokoa ny olona handeha hanao ireo zavatra ireo.
10. Ampio Pop-Up raha ilaina
Mety hahasosotra ny pop-ups raha be loatra. Na izany aza, raha marani-tsaina momba azy ireo sy ampio izy ireo raha ilaina, mety hahomby tokoa izy ireo. Ataovy azo antoka fa tsy maka toerana be loatra izy ireo rehefa miseho ary mora ny manidy azy ireo raha tian'ilay olona. Aza aseho betsaka amin'izy ireo ary ataovy izay hifanaraka amin'ny famolavolana ny tranokalanao.
11. Manolora fanohanan'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny Live Chat
Na dia mora toy ny ahoana aza ny fitetezana ny tranokalanao sy ny fitadiavana fampahalalana dia mbola hanana fanontaniana ny olona sasany. Izany no antony tsara ny manolotra fanohanana mpanjifa amin'ny alalan'ny chat mivantana. Izany dia ahafahan'ny mpitsidika manatona anao mora foana ary manontany momba ny zava-drehetra sy izay rehetra mety handresy lahatra azy ireo hividy na hanao hetsika hafa tianao hataon'izy ireo.
12. Alefaso ny fanentanana doka PPC
Farany fa tsy ny kely indrindra, ny fanentanana doka PPC na pay-per-click dia mety hahomby ihany koa amin'ny fahazoana fitarihana. Na dia tsy manana teti-bola lehibe aza ianao, dia mbola afaka manomboka ireny tsindraindray. Ataovy azo antoka fa fantatrao hoe iza ny mpihaino anao ary manomana tsara ny fampielezan-kevitrao ianao.
Amin'ny ankapobeny, ny fampitomboana ny famokarana fitarihana sy ny tahan'ny fiovam-po dia zava-dehibe amin'ny fahombiazanao raharaham-barotra ary azo antoka fa azo atao amin'ny maro sehatra. Ampiasao ireo toro-hevitra ato amin'ity lahatsoratra ity mba hanampiana anao hanatsara ny paikadinao ary hanomboka hahazo fitarihana sy fiovam-po bebe kokoa.
Ny hoavin'ny Sales Automation - Video Bots
Dec 27 | chatbot, Chatbots, Fitetezana ny fiteny natoraly, NLP, Sales, fironana teknolojia, fironana teknolojia
Ahoana no hanovan'ny Video Bots ny endrika varotra
Tanjona maranitra hanamafisana ny fampiharana Salesforce anao
Nov 15 | Fahatokisana ny mpanjifa, newgenapps, Sales
Tanjona maranitra hamp maranitra ny varotrao
Ny dingana 3 fotsiny hitarihana mangatsiaka
Dec 19 | Digital Marketing, Sales, fironana teknolojia, fironana teknolojia
Fantaro ireo dingana 3 fotsiny ilainao hanafanana ny fitarihana mangatsiaka ary hamadika azy ireo ho mpanjifa mandoa. Tari-dàlana feno amin'ny fahazoana mari-pahaizana sy fanantenana amin'ny mailaka mangatsiaka.